यदि संसारभरीका मानिस शाकाहारी भए के हुन्थ्यो होला त् ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
यदि संसारभरीका मानिस शाकाहारी भए के हुन्थ्यो होला त् ?
यहाँ हामी यसले जलवायु, वातावरण, स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्थामाथि पार्ने असर बारे कुराकानी गर्दैछौं । यदि सन् २०१५ सम्म पूरा संसार शाकाहारी भए हरेक वर्ष ७० लाख कम मृत्यु हुनेछ र यदि पशुसँग जोडिएका उत्पादन खाँदै नखाए हरेक वर्ष ८० लाख कम मानिसको मृत्यु हुन्छ ।
केही अवस्थामा यसको जैविक विविधतामा नराम्रो असर पर्ने गर्दछ । संसारका सबै मानिस शाकाहारी भए क्रिसमस टर्की (एक प्रकारको पंक्षी) हुने छैन । शाकाहारी हुनुको अर्थ यो हो कि परम्परा नराम्रो तरिकाले प्रभावित हुनेछ । संसारभरी यस्ता थुप्रै समूदाय छन् जो विवाह र उत्सवमा मासु उपहार दिन्छन् ।